Corporate ịde blọgụ maka Dummies bụ ebe a! | Martech Zone
Corporate ịde blọgụ maka Dummies bụ ebe a!
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 8, 2010 Sunday, June 22, 2014 Douglas Karr
Anyị enweghị obi ụtọ karịa! Izu a, ezigara anyị akwụkwọ izizi nke ịde blọgụ Corporate for Dummies. Enweghị m ike ịgwa gị mmetụta nganga na imeghe igbe ahụ ma hụ aha anyị ka edepụtara na mkpuchi ihu. Bloglọ ọrụ ịde blọgụ maka Dummies karịrị peeji 400 nke ozi dị ịtụnanya - ọ bụghị otu nkume ka ahapụghị ọchịchọ anyị ide akwụkwọ kacha mma maka ụlọ ọrụ na ahịa.
Ndị Wiley maka Dummies Ọkpụkpọ bụ ihe mmeri, ọkachasị gbasara akwụkwọ dịka nke a. Anyị na-enyo enyo na ọtụtụ ndị na-ewere otu ga-enwerịrị ụfọdụ ahụmịhe - yabụ edeziri akwụkwọ a ka ị nwee ike tụgharịa ozugbo na ozi ịchọrọ. Ma ọ bụ otu esi eji ya eme ihe nchịkọta, mekota na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ chebe ụlọ ọrụ gị n'ụzọ iwu - ihe niile dị mfe ịchọta.
Maka ụlọ ọrụ na-enweghị usoro ịde blọgụ ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịgụ site na ihe kpatara nsogbu maka ịnwe blọọgụ ụlọ ọrụ, otu esi ahọta ikpo okwu… ụzọ niile iji bulie blọgụ gị maka igwe ọchụchọ. Nke a abụghị akwụkwọ dị fechaa na echiche anyị - ọ bụ nkọwa siri ike banyere otu anyị siri tinye usoro ndị a maka ndị ahịa ndị ọzọ yana data iji kwado ya.
Blogde blọgụ ụlọ ọrụ anwụbeghị ma ọ na-aga n'ihu na-ebili dị ka etiti nke nnukwu usoro mgbasa ozi ọha na eze maka ụlọ ọrụ. Akwụkwọ a ga-ewepụta atụmanya maka ụlọ ọrụ gị na akụrụngwa dị mkpa yana ebumnuche ụlọ ọrụ gị nwere ike iru. Akwụkwọ ahụ leziri anya ịkọwa na ọtụtụ blọọgụ ụlọ ọrụ dara ada - nke kachasị n'ihi na ha enweghị usoro zuru ezu. Anyị na-atụ anya ịnụ ka akwụkwọ a si agbanwe nsonaazụ ụlọ ọrụ gị!
E wezụga akwụkwọ ahụ, anyị mekwala nnukwu saịtị saịtị ịde blọgụ. Saịtị depụtara na blọọgụ ụlọ ọrụ kacha mma nke isi ụlọ ọrụ, depụtara ụlọ ọrụ ịde blọgụ nyiwe na ọbụna na-ekwu ihe dị iche nke a ụlọ ọrụ blog.
Anyị azụlarị ma kesaa akwụkwọ iri na abụọ maka ndị na-ede blọgụ anyị kpọtụrụ aha n'akwụkwọ ahụ nnukwu akụ - yana otu gafere South Africa na Australia! Anyị ga-eme akwụkwọ mbinye aka nke obodo Bọọgụ Indiana - soro @BlogIndiana n'ihi na ụfọdụ Ohere iji merie a free oyiri eduga ihe omume!
Anyị enwetakwala ezigbo ihe na Facebook (karịa 2,000 fans!) Na Twitter! Jide n'aka na ị ghọrọ onye ofufe ma ọ bụ onye na-eso ụzọ maka akụkọ ụlọ ọrụ ọhụụ sitere n'aka ndị ọrụ ịde blọgụ Corporate. Yingzụ akwụkwọ ahụ abụghị naanị uru (n'agbanyeghị na ọ dị oke mma!)… Na-eso ma ọ bụ na-edebanye aha maka akwụkwọ akụkọ anyị ga-anọgide na-enye gị ndụmọdụ na ozi gafere akwụkwọ ahụ.
Tags: flannery nke chantelleụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummiesdouglas karrdummies
Google na-ewepụta vidiyo ndị akwadoro na nsonaazụ ọchụchọ
Aug 10, 2010 na 7: 35 AM
Ekele gị, Doug!
Aug 10, 2010 na 7: 58 AM
Fantastic, congrats Doug na Chantelle!
Aug 10, 2010 na 9: 56 AM
Obi abụọ adịghị ya n’uche m na akwụkwọ a ga-abụrụ nnukwu ihe enyemaka nye ọtụtụ mmadụ! Ekele !!!!
Aug 11, 2010 na 7: 41 AM
Ekelere gị n'akwụkwọ a!
Aug 11, 2010 na 8: 55 AM
Daalụ maka nkwado niile Kyle, Harrison, Paul na Brandon!
Aug 12, 2010 na 8:31 PM
Aug 14, 2010 na 9: 00 AM
Ekele! Enyere m iwu m.